Iyo software kubheja zvikamu zveiyo roulette nekumhanya kwechiedza!
Roulette Turbo Clicker iri online roulette chirongwa chinokutendera iwe kubheja kubva 1 kusvika 37 nhamba mune isingasviki sekondi.
Iyo iri chaiyo roulette bot uye inogona kugadziridzwa pane chero software yepamhepo kasino.
Roulette Turbo Clicker: ndiani anogona kuishandisa?
Inogona kushandiswa nevanoda mutambo pamasekete kana kune avo vanoshandisa ekuona ekufanotaura nzira (Visual Roulette), sevamwe otomatiki online maRoulettes anotendera iwe kubheja kunyangwe 10-12 masekondi mushure mekunge bhora rakandwa uye Roulette Turbo Clicker zvinova zvakakosha kubheja zvakare ese makumi matatu nenhamba ane 37 chete sekondi inowanikwa pasati pekuvharwa kwekubheja.
Roulette Turbo Clicker haisi nzira yemutambo, asi chishandiso chinoshandiswa kushandisa nzira, nekudaro zano rekutanga rinodiwa.
Ini zvakare ndinokuyeuchidza iwe kuti usatambe software roulette, sezvo ivo vachigona kunge vanogona kuyerwa kuita kuti mutambi arasikirwe kupfuura kupfuura chaiyo roulette yaizoita.
Roulette Turbo Clicker: ikuisirwa uye kutanga kutanga
Roulette Turbo Clicker haigadziri, saka kana yakadzingwa (ini ndinokurudzira kuzviita pakombuta), ingo unzip iyo dura uye tinya pane inogoneka kutanga software.
Roulette Turbo Clicker iri yepasirese uye inogona kushandiswa pane ese aripo pamakasino epamhepo nekuti anoshanda seizvi: kana iwe ukavhura tafura yekasino uye ndokuisa zita rewindo rewadhi raunoona pane yako yekutarisa, iyo XY detector (kumusoro kurudyi kwepaneru) izvo, kana zita rawakanyora rinowirirana zvakakwana (zvakakosha: remekedza mabara / mavara epasi), inoshanduka kuita green uye yotanga kuratidza X uye Y zvinongedzo zveiyo mbeva poindi apo iwe uchizvifambisa pa desktop yako.
Kana iwe uchida kuona ipapo kuti zviri nyore sei kumisikidza Roulette Turbo Clicker, tsvaga demo vhidhiyo pane iyo ► Youtube chiteshi di ThatsLuck.
Con Roulette Turbo Clicker hapana chikonzero chekuisa manyorerwo enhamba dziri pacarpet, ingo tarisa cheki basa Bvumira Spacebar Config uye isa pointer yegonzo pakati penhamba dzakasiyana pamutambo wekutamba.
Nekudzvanya kiyi yemuchadenga pane iyo keyboard chete kana mbeva iri pakati penhamba, marongero anozopinda muchirongwa otomatiki!
Iko mashandiro anotora isingasviki 1 mineti uye kana iwe uchinge waisa ese marongedzo iwe unogona kuvachengeta neiyo Sarudza sarudzo.
Nenzira iyi iwe unenge uine yako yekumisikidza dura kune yega tafura uye kana iwe uchichinja makasino ingo isa iyo faira (bhatani mutoro) kugadzirira kutamba mune imwe nguva!
Ngatione kuti iyo skrini skrini inotarisa sei mushure mekumisikidzwa semuenzaniso Roulette Turbo Clicker patafura yemutambo wepamhepo.
Mubhokisi riri kumusoro kuruboshwe (Windows Caption Casino) zita chairo rewindo remutambo rinofanira kuiswa, uchiremekedza kesi-inonzwisisika, zvikasadaro tafura haina kuwanikwa.
Muminda yakasiyana siyana pazasi pane ese maXY maratidziro enhamba dzetapeti, nepo kurudyi kune dzimwe mbiri dzakakosha kwazvo.
1.Kuratidzira kudzvanya PASI pokubheja: kana, semuenzaniso, chero chikonzero iwe unofanirwa kubaya pane chero bhatani mukasino kana pane imwe nzvimbo muvhidhiyo PASATI Roulette Turbo Clicker tanga kunongedzera, ingo pinda mairekodhi eichi chinongedzo / bhatani uye tarisa bhokisi Asati Betting Click.
2.Kuratidzira kudzvanya PASHURE kwekubhejera: zvimwe chete zvinoenda kuchinodiwa kudzvanya PASI pacho kubhejera, mune izvo, semuenzaniso, iyo software yekasino inoda kuti mushure mekuisa bheji, zvakafanira kuisimbisa nekudzvanya pane bhatani rekusimbisa.
Kuti zviite tinya Roulette Turbo Clicker zvakare pane iri bhatani mushure mekubhejera, marongero eiyi bhatani anozopinda pachiratidziri uye sarudzo yehukama ichaongororwa.
Izvi zvakanakisa zvese nezve kumisikidzwa, sezvo iwe uchiona chiri chiitiko chiri nyore kwazvo icho chinokutendera iwe kuti ubatanidze Roulette Turbo Clicker kune chero iripo online kasino software!
Zvinokosha: kubvira Roulette Turbo Clicker inoona mabhatani emabhatani ari pachiratidziri chako maererano necasino yemutambo wecasino, iwe unogona kusununguka kufambisa hwindo rekasino chero kwaunoda pa desktop yako, asi yeuka kuti haufanire kuiseta, seyakabatanidzwa manhamba ari kapeti yaisazowirirana!
Saka ini ndinokurudzira kuti iwe ugare uchishandisa saizi yekumisikidza yeiyo windows hwindo painovhura uye usamboichinja ivo, nezveKunyangwe kuwedzera hwindo kuzere skrini kungapa kuti isabatika Roulette Turbo Clicker.
Kana iwe ukasangana nezvinetso (mbeva inofamba asi isingabatike pane iyo nhamba), edza kudzikisira iyo yekumhanyisa kumhanya.
Kuti udzikise kumhanya uku (uko nekusarudzika kuri 0 = kwakanyanya), ingoisa kukosha mumunda Mouse Dzvanya Speed pasi kurudyi.
Kutanga edza kuisa iyo kukosha zana, kana ichiri kuenda isingawedzeri kukosha kusvika ku100, 200, nezvimwe ... kukosha 300 kunoenderana ne1.000 sekondi, asi zvaizoita kuti kubaya kwacho kunonoke kwazvo pakati pavo, kukosha kuri pakati pa1 na 25 inofanirwa kugadzirisa mamwe matambudziko.
Roulette Turbo Clicker: tinya pakumhanya kwechiedza!
Kana chirongwa changogadzirirwa, unogona kuzotanga kutamba, saka ngatione kuti ndeapi marudzi ekubheja otomatiki aungaite.
Iyo inobhejera kubhejera haina muganho, mukudzidzira ingo sarudza mangani manhamba iwe aunoda kubheja (munda NHAMBA), Sarudza iko kunongedzwa kwenhamba sekurongedzwa pairi roulette vhiri (kuruboshwe / kurudyi) uye mangani mayuniti aunoda kubheja pane imwe neimwe nhamba (munda UNITS).
Kana aya maitiro achinge aiswa, ingotinya pane nhamba yekapeti yatinoda uye Roulette Turbo Clicker ndichaita zororo!
Semuenzaniso: kana zvinoenderana neyako nzira yemutambo unofanirwa kubheja nhamba uye yayo inotevera mashanu munzira yakatenderera (nguva dzose zvinoenderana nehurongwa hweye roulette sectors), sarudza '5' mune iyo NUMBERS pani, wobva wasarudza Clockwise uye kana uchiisa bheji rako. , tinya pane iyo nhamba yekapeti iwe yaunofarira: Roulette Turbo Clicker inonongedza iyo nhamba pamwe nenhamba shanu kurudyi kwenhamba yakadzvanywa muchikamu chechipiri, zvakapusa!
Shandisa iyo keypad yenhamba
Kana iwe uchikurumidza kushandisa manhamba keypad yePC yako keyboard, unogona kugonesa iri basa nekutarisa sarudzo Shandisa Numpad.
Kuisa bheji pane kudzvanya negonzo pane iyo kapeti nhamba, ingo tinya kiyi inoteedzana pane iyo keypad Cancun, wobva wanyora iyo Nhamba, wozopedzisira wadzvanya kiyi pinda, inowanzo kuve kurudyi kweiyo Delete kiyi.
Roulette Turbo Clicker ichaisa bheji chaizvo sekunge tanga tadzvanya negonzo pane dzinoverengeka kapeti yechirongwa.
Roulette Turbo Clicker: ikozvino col otomatiki gearbox!
Kutenda nechikumbiro chemutambi izvozvi Roulette Turbo Clicker inouya nesarudzo nyowani Auto Chinja.
Mukuita, kana kasino mhenyu yaunotamba ichichinjisa iko kutenderera kweiyo roulette kana bhora pane yega spin, kutarisa iyo nyowani D. Kuchinja sezvazviri mumufananidzo, mushure mekubheja kwega kwega chirongwa ichi chinobva chachinja mafambiro echikamu chakanongedzwa kubva pawatchwise (wachi) kuenda kuccwise (anticlockwise).
Roulette Turbo Clicker: Yemahara Bet Mode
Nei uchitarisa chete pa zvikamu zve roulette?
Kutenda nechikumbiro chevatambi vaviri, ndakaita kuti kuburitswa kutsva kuwanikwe nemunhu wese Nhau mbiri dzakakosha.
Yekutanga ndiyo sarudzo 'Ramba uri pamusoro': kana iyo Roulette Turbo Clicker yakafukidzwa neiyo yekasino nekuti yako desktop resolution haina kukwana kuti ive nezvose, nekutarisa iyi sarudzo Roulette Turbo Clicker inogara yakagara pamberi peimwe windows iwe yawakavhura pane desktop.
Yechipiri uye inonyanya kukosha ruzivo ndiyo itsva nzira Kubheja Mahara.
Mune ino pani iwe unogona kusarudza sehuwandu hwakawanda sezvaunoda (izvo zvinoshandura girini) nekudzvanya kiyi bheji iyo yekudzvanya inozonongedza kusarudzo yako.
Asi hazvisi izvo zvese, kana iro boka renhamba dzaunotengesa riri kugara rakafanana pane yega yega spin, iwe unogona zvakare kugonesa sarudzo SpaceBar Kubheja.
Panguva ino, pachinzvimbo chekudzvanya negonzo pane iyo bheji kiyi nguva imwe neimwe, kubheja iwe unongoda kudzvanya (ini ndinokurudzira, kamwe chete!) Iyo nzvimbo bhaa rekhibhodi uye ndizvo zvazviri!
Kunze kwekukwanisa kusarudza nhamba dzaunoda kubheja pane yega yega spin, iwe zvakare unogona kugadzirira gumi nemaviri zvinyorwa zvekushandisa panguva chaiyo!
Con Roulette Turbo Clicker unogona muchokwadi kusvika kusvika gumi nematanhatu enhamba dzenhamba kubheja, unogona kuzvishandisa zvakasiyana, asiwo panguva imwe chete!
Ngatimboonai pakarepo makiyi aripo mune ino nyowani pani yeiyo Yemahara Bet Mode:
Ratidza / Viga Rondedzero: bhatani iri rinoratidza kana kuvanza maonero ezvinyorwa gumi nezviviri; mukuita, kana iwe ukashandisa zvinyorwa zvishoma uye uchirangarira kuti ndeipi nhamba kubva pa12 kusvika pa1 iyo inosanganisirwa nayo, unogona zvakare kuviga rondedzero uye tarisa nhamba inoenderana nerondedzero yenhamba dzaunoda kunongedzera, nenzira iyi software icha tora nzvimbo shoma pane desktop.
Reload Lists: bhatani iri rinodzokororazve / kugadzirisa zvese zvinyorwa. Zvinokosha: inofanirwa kumanikidzwa pese paunoshandura runyorwa uye nekurichengeta, nekuti rinofanira kugara richiiswa mundangariro. Uyezve, pese paunotanga chirongwa zvinyorwa zvinofanirwa kugara zvichitakurwa kudzvanya iyi kiyi.
Sarudza Rondedzero: bhatani iri rinosimbisa sarudzo yako. Mukuita, iwe unotarisa rondedzero nhamba kubva pa1 kusvika pa12 (unogona zvakare kusarudza inopfuura imwe) uye nekudzvanya bhatani iri nhamba dzetapeti dzasvibira (zvinoreva kuti ndivo vanobheja). Panguva ino iwe unofanirwa kungobaya pane yekusimbisa bhatani bheji kunyatso tarisa kusarudzwa.
Hora Rondedzero: kana iwe uchida kugadzirisa imwe kana akawanda ezvinyorwa zvemabheji kubheja, iwe unongofanirwa kutarisa iyo runyorwa nhamba kubva 1 kusvika 12 iwe unofarira uye tinya iyi bhatani. Iyo rondedzero ichavhura mune yakasarudzika Windows Notepad uye iwe unogona kuigadzirisa sezvaunoda. Mushure mekuita shanduko inodiwa, vhara iyo faira nekupindura Si kune iyo yekukumbira chikumbiro pakubuda. Rangarira kuti mushure mekushandurwa kweimwe runyorwa iwe unofanirwa kunyatso bhatani bhatani Dzokororazve Rondedzero kugadzirisa zvinyorwa.
Lists Folder: kiyi iyi inovhura dhairekodhi rechirongwa rine zvese gumi nemaviri zvinyorwa mumavara faira fomati. Iwo mafaera anogona kuve ese akagadziridzwa semukati, asi zvachose kwete kuzotumidzwazve zita. Mune dhairekitori iwe unoona ese gumi nemaviri mafaera, unogona kuagadzirisa sezvaunoda uye, kana wangovharwa uye chengetwa, unofanirwa kugara uchidhinda kiyi Dzokororazve Rondedzero kugadzirisa zvinyorwa muchirongwa.
Zvakare Mahara Bheji Mamemo zvinokwanisika kushandisa iyo NumPad sezvazviri muSectorial Bet Mode, asi mune ino nyaya kusarudzwa nekiyi kiyi hakunongedze iyo nhamba zvakananga, asi kungoisarudza chete, sekunge kudzvanya pamanani epeti kapeti pavanosvibira, iko iko kusarudzwa kwapera , kubheja chaizvo idzi nhamba iwe uchatofanira kubaya pane bhatani bheji, kana zvichidikanwa, inogona kutsiviwa kuti zvive nyore nekiyi yemuchadenga pane iyo keyboard kana sarudzo yehukama yakatariswa SpaceBar Kubheja.